Booliska oo dilay aabe iyo labadiisa caruur oo lagu tuhmay Al-Shabaab
NAIROBI, Kenya – Booliska Kenya ayaa lasoo wariyey in howlgal ay xalay ku beegsadeen guri ku yaala xaafadda Kibundani ee degaanka Kwale ay ku dileen aabe iyo labadiisa caruur oo lagu tuhmay AlShabaabnimo.
Mohamed Mapenzi ayaa lagu waramay in uu bam-gacmeed kusoo tuuray ciidamada intii howlgalka uu socday. Caruurta oo isaga uu dhalay waxaa la aaminsan yahay in uu gabaad ahaan ugu haystay guriga.
"Isla markiiba saraakiisha ay jabiyeen guriga, wuxuu si dhaqsiyaha ugu soo gannay bam-gaccmeed sababtay dhaawaca midkood," ayuu wargeyska afka dheer ee Daily Nation kasoo xigtay warbixin taliska kasoo baxday.
Xaaska ruuxa la tuhunsan yahay iyo saddex caruur kale oo uu dhacay oo sidoo kale ku dhaawacmay howlgalka ayaa Isbitaal la dhigay.
Illo wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijiyey in hoyga Mapenzi uu far-muuqay la tuhunsane kale oo ka tirsan maleeyshiyada Al-Shabaab.
Saidi Chitswa oo loo garan-og-yahay Ninja oo ah ninka bixiyey xogta Mapenzi isla markaana Shabaabka u qori jiray dhalinta ayaa lasoo xiray markii la helay xog sheegeysa in uu qorsheynayo weeraro.
Goobjoogeyaal ayaa tilmaamay in ciidamadda booliska sidda gaarka ah u tababaran ay hoyga Mapenzi kasoo saareen qoryaha fudud, bam-baanooyin iyo darees ciidan.
"Laba ruux kale oo laga shakiyey ayaa laga soo xiray goobta," ayuu yiri Washington Njiru, oo ah madaxa Hay'adda Dambi-baarista.
Bishii hore ayay ahayd markii Mombasa lagu dilay laba lagu tuhmayo Al-Shabaab. Suleiman Ali Kodza iyo Kodza waxaa lagu waramay in ay ka tirsanaayeen shabakadda Mapenzi ayna maleegayeen weeraro.
Laamaha ammaanka Kenya ayaa xoojiyey baacsiga xubnaha Al-Shabaab kadib markii bilowgii sanadkan 2020 ay weeraro dhowr ah ka geysteen waqooyi-bari waddankaas, halkaasoo ay ku laayeen tobanaan kale oo shacaba.
Qarax khasaaro dhaliyey oo ka dhacay agagaarka dekada Muqdisho
Soomaliya 04.07.2020. 09:55
Bartilaameedka qaraxa wuxuu ahaa dhismo cusub oo dhawaan laga dhisay meel kasoo horjeeda Dekadda magaaladda Muqdisho.
Dhismahada wadada Muqdisho iyo Afgooye oo hakad ku jirta lix bilood
Soomaliya 16.06.2020. 16:00
Diyaarad dhaawacyo sidday oo ka degtay magaaladda Muqdisho
Soomaliya 07.06.2020. 13:45
Al-Shabaab oo fagaare ku toogatay rag ay ku eedeysay jaajuusnimo
Soomaliya 31.03.2020. 18:39
Duulaanka DF ee maamulada oo laga digay in uu "awood-siiyo" Al-Shabaab
Soomaliya 03.03.2020. 07:00
Guluf ka dhan ah fariisinka ugu weyn Al-Shabaab oo la abaabulayo
Soomaliya 23.02.2020. 15:01